इटाली - ALinks
इटाली मा लेख
यी साधारण चरणहरूको साथ इटालीको लागि भिसा लागू गर्नुहोस्!
नोभेम्बर 9, 2020 शुभम शर्मा इटाली, भिसा
विश्वको सातौं ठूलो अर्थतन्त्र, इटाली गणराज्य भूमध्यसागरको मध्य भागमा अवस्थित छ। यो रोमन साम्राज्यबाट देखा पर्‍यो जुन अहिलेसम्म अस्तित्वमा नपुगेको सबैभन्दा महान युरोपेली साम्राज्य मध्ये एक थियो। परिणाम स्वरूप, त्यहाँ धेरै छन्
भारतीयहरूको लागि इटाली भिसा
अक्टोबर 19, 2020 मैत्री झा इटाली, भिसा
रोम, फ्लोरेन्स, भेनिस, मिलान। इटाली अन्य कुनै ठाउँ जस्तो गन्तव्य हो। योसँगै अर्को थुप्रै ग्रहणकारी शहरहरू छन्। यहाँ पर्यटकहरू कला, संगीत, आर्किटेक्चर, फेसन, शपिंग, र खानाको मजा लिन यहाँ छन्। यो माथिबाट एक हो
इटाली पर्यटक भिसा भारतीय नागरिकका लागि
अक्टोबर 6, 2020 मैत्री झा इटाली, भिसा
के तपाईंले कहिल्यै दा भिन्सीको मूल चित्रण हेर्न चाहानुहुन्छ? अन्तिम बेलुकाको खाना वा बोटिसेलीको शुक्रको जन्म? सिस्टिन चैपलमा माइकलएन्जेलोको प्रख्यात फ्रेस्को बारेमा के भन्न सकिन्छ? यो इटालीलाई 'Ciao' भन्न समय भयो यदि तपाईं हच्नुभयो भने
इटाली भ्रमण गर्न उत्तम समय थाहा पाउनुहोस् !!
जुन 11, 2020 करुणा चन्दना इटाली, यात्रा
युरोप मा स्थित, बुट आकार को देश। यो संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य मध्ये एक हो। त्यो विभिन्न कारणका लागि लोकप्रिय छ। कला, रत्नहरू, प्रसन्न शहरहरू, सुन्दर परिदृश्यहरू, भावुक व्यक्तिहरू, र शीर्ष-वर्गको खाना सहित। इटाली एक प्रदान गर्दछ
Shopaholics? इटालीमा यी मल्लहरूसँग किनमेल गर्नुहोस् !!
अप्रिल 9, 2020 करुणा चन्दना इटाली
कम्तिमा पनि एक पटक जीवनकालमा तपाईले इटाली भ्रमण गर्नु पर्ने एक सय कारणहरू छन्। इटालीसँग धेरै चीजहरू प्रदान गर्न सकिन्छ, जस्तो कि शपिंग गर्दा आकर्षक अनुभव। यो देश शपिंग गर्नका लागि उत्तम स्थानहरूको घर हो
एक इटाली यात्रा लागत कति हुनेछ? आउनुहोस्!
मार्च 1, 2020 करुणा चन्दना इटाली, यात्रा
इटाली एक देश हो जहाँ विश्वभरि हजारौं व्यक्तिहरू हरेक वर्ष भ्रमण गर्न जान्छन्। यो विश्वमा यसको रमाईलो र सुन्दर परिदृश्यका लागि प्रसिद्ध छ। यो युरोपियन देशको भ्रमण गर्नका निम्ति एकदम महँगो ठाउँको रूपमा प्रतिष्ठित छ।
जनवरी 3, 2020 करुणा चन्दना इटाली, अध्ययन
इटालीको ऐतिहासिक खजाना र भव्य खानाले आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गरिरहन्छ। इटाली पनि बजेटमैत्री अध्ययन गन्तव्य हो। जबकि आवासको लागत रोम वा मिलान जस्ता ठूला शहरहरूमा उच्च हुन सक्छ। तर साना शहरहरू इटालीमा धेरै सस्तो छन्। इटालीहरू छन्